M!иикy@иs^s β ﻠ õ §: နှင်းဆီဆူး
Posted by မင်းကျန်စစ်။ at 7:26 PM
အားပေးသွားတယ်နော် တစ်ကယ်ဆို အလွမ်းဇာတ်တွေဖတ်ချင်ဝူး
စိတ်ညစ်လို့ ဒါပေသိ အဆုံးထိ အားပေးသွားတယ်
ကြံဆစ် အဲ့လေ ကျန်စစ် :P
Yin Nint Pan said...
"မောင်မဟုတ်တဲ့ တခြားသူတွေရဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေအပေါ် ကျွန်မမသာယာနိုင်ဘူး။ ကျွန်မကို အမြန်လာခေါ်ပါတော့မောင်…" အရေး အသေားတော့ အရမ်းကောင်းတယ်.. အပြင်မှာသာဆိုရင်တော့ ရူးများသွားမလား မသိဘူး။ ဝတ္ထုတို ဖြစ်နေလို့သာပေါ့...
အမြန်လာခေါ်ပါတော့.. မောင် :P :) :D
ဝတ္ထုလေး . .လာအားပေးတယ်... ဟဲ.. မိုက်တယ်.. :P
“နှင်းဆီပန်း လိုချင်ရင်တော့ ဆူးဆိုတာ ပါလာမှာပဲ။ ဆူးမပါတဲ့ နှင်းဆီဟာ စုတ်ချက်မပြည့်တဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်လိုပဲ”
ကောင်းလိုက်တဲ့ စားသား အားပါးပါး ။မှတ်သားလောက်တယ်။လန်ထုတ်နေပါလား။
ဖုန်းကညာတစ်ပါး လုံးရာက ပြားသွားသလားလို့ ။:P
ဟုတ်တယ်နော်... လိုချင်တဲ့အရာဟာ အသက်မက မြတ်နိုးတဲ့အခါမှာ ဆူးပါလည်း မြတ်နိုးရမှာ အချစ်စစ်ရဲ့ သဘောပါ... အရမ်းကောင်းပါတယ်.. အားပေးနေပါတယ်... ချစ်သူတိုင်း မည်သည့်အကြောင်းနဲ့မှ မကွဲကွာပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်...
ကိုကျန်ကြီး စာပြန်ရေးပြီပေါ့ .. ကောင်းပါ့ရှင် အမြဲလာအားပေးမယ်
မိုက်တယ်... မိန်းကလေးနေရာကနေ ခံစားပြီးတော့ ထပ်ရေးပါအုံး .. :D :D
****(ယောက်ျားလေးနေရာကပဲ ခံစားပြီးရေးနေကျမို့ ဒီတခါတော့ စဉ်းစားမိတဲ့ ဇတ်လမ်းကလည်း မိန်းကလေးအနေနဲ့ ရေးဖို့ပိုကောင်းလို့ ဒီလိုရေးလိုက်တာဗျာ။ တော်ကြာ မောင်ကျန် ဘယ်လိုဖြစ်သွားပါလိမ့် ဖြစ်နေကြဦးမယ်။ အထင်မှားရဘူးနော် ကြောက်ကြောက်)***
ကောင်းလိုက်တဲ့ ၀တ္ထု ငါ့သားက သိပ်တော်တာပဲ အမေလောက်နီးနီးပါလားနော်..။း)
မိန်းကလေးနေရာကခံစားရေးတာတောင် ကောင်းလိုက်တာ ငါ့သားရေ ဆက်ရေးပါအုံးကွ
ပျောက်နေတာ ကြာပြီ... တင်လိုက်တော့လည်း အလန်ပါပဲလား ငါ့မောင်လေးရယ်။ မောင် ဆိုလို့ သတိရသွားပြီ။ အဟင့်...ဗြဲ...
Female ခံစားချက်နဲ့ ရေးတဲ့ Post ကိုဖတ်သွားတယ်။
မောင်ပြန်လာခဲ့မယ်... တစ်နေ့မှာ တွေ့ဆုံကြတာပေါ့ကွာ... အဟိ... အဟတ်ဟတ်.. အဟေးဟေး... စိတ်ဆိုးနဲ့ စတာ... ဖတ်ရတာ တစ်မျိုးကြီးပဲ... ဇာတ်လမ်းလေး ကောင်းမယ်ကြံလိုက် ခင်ဗျား မျက်နှာမြင်လာလိုက်နဲ့... အဟိ.. အူယားလိုက်တာဗျာ... ကောင်းတယ်.. ဆွဲသာဆွဲ.. အားပေးလျှက်...
ဘက်စုံရတယ် ဆိုပါတော့ မစစ်ရေ...
ကောင်းတော့ကောင်းတယ် မျက်စိစပ်တယ် လို့ ပြောရမလားပဲနော်...
ညီတော် ကနေ.. နှမတော်.. လို့ ပြောင်း ခေါ်ရင် ကောင်းမလား.... :P
အဟ .... အစစ်ကနေ အတုပြောင်းကုန်ပီလားဟေ .
ပာုတ်ရဲ့လား.. ပာုတ်ရဲ့လား.. :D
ကျွန်မသာဆိုလဲ မင်းကျန်စစ်ရေးသလိုမျိုးပဲ ဖြစ်ရလိမ့်မယ်...
အချစ်ဆိုတာ အဲလောက်ရူးသွပ်စရာ မဟုတ်ဘူးလို့ တစ်ချို့က ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမယ့်
စစ်မှန်စွာ ချစ်မိပြီ ဆိုရင်တော့...
ချစ်သူအနားမှာ မရှိရင် ကျွန်မဆိုတာ
အဟဲ စိတ်ချ စိတ်ချ
လုံးဝအထင်မမှားပါဘူး မမ အဲ
အခုမှ ဖတ်ဖြစ်တယ် ဒီလိုလည်း ရတာကိုး
သနားပါတယ်နော်။ အဲလိုမျိုးလူတွေလည်း။ ဘာပြောရမှန်းလည်းမသိဘူး။ သူတို့လည်း သူတို့ခံစားချက်နဲ့သူတို့ဆိုတော့။